Wordplanet: Ciise waa la baabtiisay; Ciise Wuxuu Bogsiiyey dadka bukaa; Ciise Wuxuu Bogsiiyey jinni - MARKOS
MARKOS - Cutub 1
1Bilowgii injiilkii Ciise Masiix, oo ah Wiilka Ilaah.
MARKOS - Cutub 3
1Kol dambe wuxuu galay sunagogga; halkaasna waxaa joogay nin gacan engegan.
MARKOS - Cutub 4
MARKOS - Cutub 5
MARKOS - Cutub 7
MARKOS - Cutub 9
1Wuxuu iyaga ku yidhi, Runtii waxaan idinku leeyahay, Kuwa halkan taagan qaarkood sinaba dhimasho uma dhadhamin doonaan ilaa ay arkaan boqortooyada Ilaah oo xoog ku imanaysa.
MARKOS - Cutub 11
33 Wakamjibu Yesu, wakasema, Hatujui. Yesu akawaambia, Wala mimi siwaambii ninyi ni kwa mamlaka gani nayatenda haya.Goortay Yeruusaalem ku soo dhowaadeen, halka Beytfaage iyo Beytaniya, xaggii Buur Saytuun, xertiisii ayuu laba ka diray.
MARKOS - Cutub 13
MARKOS - Cutub 15
1Aroortii kolkiiba wadaaddadii sare waxay la wada hadleen waayeelladii iyo culimmadii iyo shirkii oo dhan. Ciisena way xidheen oo kaxeeyeen oo waxay u dhiibeen Bilaatos.
MARKOS - Cutub 16
1Goortii sabtidii dhammaatay Maryan tii reer Magdala, iyo Maryan oo ahayd Yacquub hooyadiis, iyo Saloome, waxay iibsadeen dhir udgoon inay u yimaadaan oo mariyaan isaga.